प्रचण्डको सुरक्षामा ५९ सुरक्षाकर्मी, पीएसओ फेरिए
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवंम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निजी सुरक्षा अधिकृत फेरिएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) नरेशराज सुवेदीलाई दाहालको पीएसओको रुपमा..
१३ जना नेपाली रसियामा अलपत्र, दूतावासका कर्मचारीको जवाफ :सुतेर तलब पाइन्छ ?
काठमाडौं । ‘गार्मेन्ट टेलर’ पदमा श्रम स्वीकृति लिएर रसिया पुगेका १३ नेपाली युवा रोजगारदाताले काम नदिँदा अलपत्र परेका छन् । बौद्धस्थित काठमाडौँ ब्राइट ह्युमन रिसोर्स प्रालिबाट उडेका उनीहरु रसिया पुगेका..
'हाम्मा कुडा, हाम्मा मुख्यमन्त्री' नारासहित आयो कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७६ ७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बुधवार प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले ३२ पेज लामो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे। “शिक्षा,..
काठमाडौं। नेपालमा विसं २०७२ को विनासकारी महाभूकम्पपछि अमेरिकामा रहेका अस्थायी बसोबार अनुमति (टिपिएस) पाएका करिब ९ हजार नेपालीले अमेरिका स्थायी बसोबासको सुविधा (ग्रिन कार्ड) पाउने संभावना बढेको छ । यसअघि निकै..
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत बिहीबार शितलनिवासमा २०६४ र २०७० सालमा भएको संविधानसभाका सभासद्लाई बाँडिएको पदक अहिले विवादमा परेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संविधान जारी गरेकोमा स्याबासी दिन..
कुलमानमाथि अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्छ:सांसद् महेश बस्नेत
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद् महेश बस्नेतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद् बस्नेतले कुलमानजीले गरेको राम्रा कामहरु..
‘भुकम्प जादैछ भन्ने ज्योतिषी’ अर्जुन क्षेत्री पक्राउ
काठमाडौं । आफूलाई ज्योतिषी बताउने अर्जुन क्षेत्रीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । विभिन्न युट्युब च्यानलमा अन्तर्वार्ता दिँदै विपदसम्बन्धी अफवाह फैलाएको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले..
प्रधानमन्त्री ओलीको गाउँमा साढे ४९ करोड, पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको १९ करोड मात्रै बजेट
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गाउँ (दमक नगरपालिका)ले सरकारबाट ४९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापतिसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको..
कुन स्थानीय तहलाई कति अनुदान ? हेर्नुस् सूची
काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तह र प्रदेशका लागि उपलब्ध गराएको अनुदान सार्वजनिक गरेको छ। अर्थले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार प्रदेशतर्फ सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशले र स्थानीय तहतर्फ..
अमेरिकालाई चीनको युद्धको धम्की
एजेन्सी । चीनले आइतबार अमेरिकालाई युद्धको धम्की दिएर सनसनी पैmलाएको छ । चीनको रक्षा मन्त्री वेई फेङले भनेका छन्,“अमेरिकासँग चीनको युद्ध विश्वका लागि भयावह हुन सक्छ ।” ताइवान र दक्षिण..
बजेटमाथि कांग्रेसको टिप्पणी: भन्यो अन्यौलको ‘कपी पेष्ट’ विज्ञप्तीसहित
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको बजेटमाथि प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले शुक्रबार आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले बजेट बनाउँदा ३ वटा थथ्य विर्सिएको दाबी गरे..
सीतारमण बनिन् भारतको पहिलो महिला अर्थमन्त्री
दोस्रो कार्यकालका लागि बिहीबार सपथ लिएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन तोकेका छन्। मोदीको नयाँ मन्त्रिपरिषदमा पहिलो पटक महिलालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। हिजै सपथ लिएकी नेतृ निर्मला सीतारमणले..
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको व्यवसायीक साझेदार प्रभाकर राणाको निधन
काठमाडौं । चर्चित उद्योगी तथा व्यवसायी प्रभाकर समशेर राणाको निधन भएको छ । उनको ८४ वर्षको उमेरमा अमेरिकामा निधन भएको हो । नशा सम्बन्धी रोगबाट पीडित राणा अमेरिकामा उपचार भइरहेको थियो..
तपाई १ रुपैयाँ तिर्नुस्, खाल्डोबाट हामी जोगाउँछौं : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बजेटमा सडक सुधारका लागि डिजेल तथा पेट्रोलमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ सडक सुधार कर लगाएको बताएका छन् । सडक सुधारका लागि यो कर लागिएको भन्दै..
बजेट भाषणअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले के के निर्णय गरेको थियो ?
काठमाडौं । सरकारले गत जेठ १०, १३ र १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। बिहिबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सरकार प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले..
आजदेखि ३ दिनसम्म हावाहुरी र मेघगर्जनसहित वर्षा हुने
काठमाडौं । आज बिहीबारदेखि शनिबारसम्म देशका अधिकाँश ठाउँमा हावाहुरी र मेघ गर्जनसहित वर्षा हुने सम्भावना छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकी मञ्जु बिसीका अनुसार, आज पश्चिमी तराई क्षेत्रबाहेक पूर्वका तराई..
दैवीक शक्ति पाउन भन्दै झाक्रीले दिए छिमेकी बालकको बलि
अन्धविश्वासले अढाई वर्षीय बालकको बलि दिएको खुलेको छ । ढल्केवरका शम्भु साहका छोरा आर्यनको शव वैशाख २४ को बिहान घरनजिकैको बाँसघारीमा भेटिएको थियो । उक्त शव बलि दिएर फालेको प्रहरी..
करको न्यूनतम सिमामा छुट, अब कसले कति तिर्नुपर्छ ?
काठमाडौैं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आयकरको न्यूनतम सिमा बढाएका छन् । अन्य दरहरु भने यथावत राखेका छन् । अब अविवाहित व्यक्तिले वार्षिक ४ लाख आम्दानी गर्दा १ प्रतिशत कर लाग्छ..
१५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट पेश, साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट संसदमा पेश गरेको छ । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा ८ दशमलव..
सरकारी कर्मचारीको तलव २० प्रतिशतसम्म बृद्धि
काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीको तलबभत्तामा पनि बृद्धि भएको छ । अहिलेको तलबमा उपल्लो तहकालाई १८ प्रतिशत र तल्लो तहकालाई २० प्रतिशतसम्म तलव बृद्धि हुने छ । केही समयदेखि कर्मचारी संगठनहरुले तलब र..
सांसदलाई खुशी पार्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि सांसदलाई सीधै पैसा नदिन दबाबलाई पन्छाउँदै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पचास प्रतिशत रकम बढाइदिएका छन्। उनले बजेटमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम ५० प्रतिशत बढाइदिएका..
आज रातिदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा सडक कर लाग्ने
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले सडक बनाउनका लागि प्रतिलिटर १ रुपैयाँ कर लगाउने भएको छ । उक्त कर आजै रातिदेखि लागू हुनेछ । यसअघि सरकारले बुढीगण्डकी बनाउgका लागि प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ..
१८ आयोजनाबाट ३५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, उर्जामा ८३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं। सरकारले १८ आयोजनाबाट ३५ सय मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्ने अभियान बजेटमा प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ। बजेटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई १३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ। यसैगरी माथिल्लो अरुण,..
सहकारीलाई मर्जरमा लगिने, ब्याजदर प्रतिस्पर्धी बनाइने
काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थालाई मर्जरमा जानको लागि प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । सहकारी तथा भूमि व्यवस्थाको लागि ७ अर्ब ६९ करोड विनियोजन भएको छ। कृषि, उर्जा, आवास, पर्यटन क्षेत्रमा सहकारीले प्रवेश..
कृषि उत्पादन गर्नेलाई परियोजना धितोमै ऋण, थप अन्य धितो नचाहिने
काठमाडौं। मध्यम खालका कृषकलाई परियोजना धितोमा नै ऋण दिइने भएको छ। यो ऋण साना किसान विकास बैंकबाट उपलब्ध हुने छ। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तु गर्दै यसका लागि एक अर्ब..
वृद्ध भत्ता २ हजारबाट ३ हजार पुग्यो, अरुको भत्ता पनि बढ्यो
काठमाडौं। सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको भत्ता बढाएको छ। गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्मलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले घोषणा गरेका छन्। ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने भत्ता बढाएर ३ हजार बनाइएको छ। यसअघि..
अपडेट : अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्य वाचन गरेर सकेका छन् । पूंजीबजारलाई बजेटबाट राहत मिल्ने । गैर आवाशीय नेपालीलाई लगानीको सुबिधा र पुँजीगत लाभकरमा गिरावट । ८.५ प्रतिशतको आर्थिक..
एसएलसी पास प्रधानमन्त्री ओलीको चौथो विद्यावारिधि क्रिस्टिचियानिटी विश्वविद्यालयको
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कोरियाको काङनाम विश्वविद्यालयले मानार्थ विद्यावारिधि प्रदान गर्ने भएको छ। यो उनको चौथो मानार्थ विद्यावारिधि हो। सत्तरी वर्ष लामो इतिहास भएको काङनाम विश्वविद्यालय क्रिस्टिचियानिटी र मानवताको..
भोली दिउँसो ४ बजे झन्डै १६ खर्बको बजेट ल्याइने, बृद्धभत्ता र कर्मचारी तलवमा बृद्धि
काठमाडौं । भोली जेठ १५ गते दिउँसो ४ बजे संसदमा बजेट प्रस्तुत हुने छ। सभामुख कृष्णबहादुर महराले आर्थिक वर्ष २०७६ ०७७ को बजेट दिउँसो ४ बजे प्रस्तुत हुने जानकारी गराएका..
करिष्माद्वारा पार्टी परित्यागको घोषणा
काठमाडौं । अभिनेत्री करिष्मा मानन्धरले पार्टी परित्यागको घोषणा गरेकी छिन् । तत्कालीन नयाँ शक्तिकी नेत्री मानन्धरले अब आफू हाल सक्रिय रहेको पार्टीको राजनीतिमा नरहेको बताएकी हुन् । चैत २३ गते तत्कालीन..
Results 1994: You are at page 10 of 67